सम्झना कलिला मनहरूलाई - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
- यमुना थापा
जिन्दगीको वसन्तको रङ्ग ओढ्दै गरेर आँखामा सुनौला सपना बोकेर हिँडेका नानीहरू तिम्रो यो उमेरसँग साह्रै डाहा लाग्छ मलाई ! अनि माया त्यो भन्दा कति हो कति धेरै लाग्छ। यो तिम्रो उमेरलाई बाँच्ने समय हो । संसारका सारा दुख एकातिर पन्छाएर तिमी मात्र “तिमी” भएर नाच, गाउ, उफ्राैं अनेक सपना देख सपनामा रङ्ग भर, रङ्ग यसरी भर कि बेप्रवाह भएर भर। के थाहा कुन रङ्ग कहाँ सुहाइ जाने हो। जब सुहाउने रङ्ग पाउँछौ त्यसलाई भने न छोड नि फेरि।त्यसलाई सम्हालेर राख ताकी त्यो रङ्गले तिम्रो आउने जिन्दगीलाई मीठो हुने गरी रङ्गाओस्।
प्यारा नानीहरू जब जब म तिमीलाई देख्छु।यो समयमा म आफूलाई तिम्रो उमेरमा दाँजेर कल्पना गर्छु ।म केके सोच्थे त्यो उमेरमा। के के रहर थिए मेरा । त्यो समयमा यस्तै यस्तै। प्यारा नानीहरू जब म तिमीहरूको उमेरमा थिए, थिएनन् मसँग खेल्नलाई यी अनेक प्रकारका खेलौना र गुडिया थिएनन । न त अहिलेकाे जस्ताे मोबाइल र ल्यापटप नै,न थियो नेट र इन्टरनेट नै। हो मलाई यत्ति याद छ, बाबाको सानो मोबाइल थियो । जसमा रेडियो बज्थ्यो त्यसलाई सुन्न पाउँदा छुन पाउँदा संसारको ठुलै कुरा पाएको जस्तो लाग्थ्यो ।
अहिलेको जस्तो त्यति बेला बजारमा यति धेरै जङ फुड कहाँ पाइन्थे र । अनि विद्यालयले क्यान्टिन कहाँ खोलेका थिए र थाहा छ, विद्यालय जाँदा आमाले कहिले कसो मकै र भटमास भुटिदिनु हुन्थ्यो। त्यही बोकेर म विद्यालय जान्थे, साथीसँग बाँडेर खादा त्यो जति मीठो केही लाग्दैनथ्यो। आजभोलि पनि सम्झिदा त्यो मिठासले मुख मिठाउँछ।अनि सरकारले सबै सरकारी विद्यालयमा हलुवा दिन्थ्यो । हाम्रो लागि मोमो पनि चाउमिन पनि त्यही हलुवा थियो।साँच्चै कति मीठो लाग्थ्यो त्यो हलुवा।अझ त्यो हलुवा थाप्नलाई हामी घर देखि नै प्लेट लिएर जान्थ्यौ ।
कहाँ अहिलेको जस्तो अनुशासनमा निगरानी राख्थे र ! त्यति बेला शिक्षकले न ड्रेसमा कडाइ नै गर्थे । तर पनि हामीमा शिक्षकप्रति छुटै आदर थियो। शिक्षकलाई भगवान् मानेर आदर गर्न मन देखि नै आउँथ्यो ।आमाले दुई चुल्ठी बाटिदिँदा यसै यसै गमक्क परेर विद्यालय जानुको आनन्द नै छुट्टै थियो। विद्यालय कुनै मन्दिर भन्दा कम कहिल्यै लागेन। विद्यालय जाने रहर कहिल्यै सकिएन।विद्यालय सकिएको आज कयौँ वर्ष हुँदा पनि विद्यालय देख्दा लाग्छ फेरि त्यही उमेरमा जाऊ र तिनै कक्षा बसु, पढु। विद्यालयको जस्तो मीठो सुगन्ध म संसारमा अन्त कहीँ पाउँदिन।त्यसैले त त्यसै भनेका हैनन् होला विद्धानहरूले संसारको पवित्र ठाउँ भनेकै विद्यालय हो भनेर।
प्यारा नानीहरू मलाई तिमीहरूको तिम्रो उमेरको सम्झना यस कारण पनि अझ बढी आउँछ कि म त्यो अवस्थामा तिमीहरू जस्तै थिए।ठिक तिमी जस्तै न ठुलोमा न सानोमा गाभिन सक्ने।एउटा व्यक्तित्व जो शरीर ठुलो भइसक्छ । तरुणी भइसक्छ । र जहाँ आफूभित्र मन नलागी नलागी भाग्न लागेका केटा- कुटिले भात पकाइ खेल्ने रहर, पुतलीको पछि भाग्ने रहर यस्तै यस्तै रहरले समेटिएको हुन्छ ।
थाहा छ यही उमेरमा नै हो हामीले सबै कुरा सिक्दै जाने मेहनत र पसिनाको मूल्य थाहा पाउने। मेहनत र पसिनाको मूल्य थाहा पाउनु पनि कम उपलब्धि हैन । जिन्दगीको बरु यो त एउटा कठोर सत्य हो । जुन तिमीहरूले एक दिन स्विकार्ने छौ।एक जना महान् दार्शनिकले भनेका छ “जसले काम गर्दैन, उसलाई खाने अधिकार छैन”।
तिमीले खेलेको देख्दा खेल्न मन लाग्दा।तिमीले पढेको देख्दा के पढ्दै छौ भनेर जान्न मन लाग्छ।चित्रमा रङ्ग भर्दै गरेको देख्दा तिमीहरूसँगै बसेर ती चित्रमा रङ्ग भर्न मन लाग्छ। साँच्चै मलाई जान्न मन लाग्छ तिमीहरूले के सिक्दै छौ ? कस्तो सिक्दै छौ ? कतै मोबाइल र इन्टरनेटको दुनियाँमा त हराएनौ ? कतै मोबाइल इन्टरनेटको आदि त भएनौ ? कहीँ बिर्सियौ कि आफूलाई आफ्नालाई अनि सबैभन्दा ठुलो कुरा आफ्नो देशलाई। मोबाइल र इन्टरनेटमा संसारलाई चहार्दा चार्दै कतै तिमीले आफ्नै अस्तित्व त धरापमा पारिरहेका छैन।तिम्रो मोबाइल र इन्टरनेटसँगको यो मोह देख्दा साह्रै दुख लाग्छ।अब त तिमी बिस्तारै ठुलो हुँदै छौ तिमीमा समवेदनाको विकास हुनुपर्छ।तिमी अल्झिनु हुँदैन कसैको ललाई फकाइमा।दया र मायाको कदर हुनुपर्छ तिम्रो मनमा ।
थाहा छ यो संसारमा एक थरी यस्ता मान्छे हुन्छन् जो थोरै दिएर धेरै पाउन खोज्छन्।अर्को थरी यस्ता मान्छे हुन्छन् जोसँग दिएर पनि पाउने चाहाना न्यून हुन्छ। तिमी कस्तो मान्छे बन्ने त्यो तिम्रो हातको कुरा हुन आउँछ।तिमी भविष्यमा के बन्ने कस्तो बन्ने त्यो तिम्रो निजी विचार हो। बस कुनै पेसा प्रति हिनताको दृष्टि नराख। तिमी कल्पना गर्दै जाऊ डाक्टर नर्स बन्नु, डोजर रेल, पानीजहाज, जहाज चलाउनु, आधुनिक कृषि गर्नु .. जुनै काम गर्नु तर पसिनाको मूल्यको मान गर्नु किनकि संसारले कदर गर्ने भनेकै पसिनाको हो । अनि पसिनाको कमाई सेतो हुन्छ कालो रङ्ग र धन यहाँ कसैले मन पराउँदैनन्।अर्को कुरा तिमीले तिम्रा बाबा आमासँग सिक्ने ठुलो कुरा भनेको दुखको,सङ्घर्ष हो।सोच त तिमीलाई यति ठुलो बनाउनको निम्ति तिम्रा बाबा आमाले कति दुख गर्नु भयो होला, कति सङ्घर्ष गर्नु भयो होला।
प्यारा नानीहरू तिमी झुट कहिल्यै नबोल्नु, बाबा आमाको अनादर कहिल्यै नगर्नु । देशलाई गाली नगर्नु । आफूभन्दा सानालाई माया गर्नु अनि परिश्रम र पसिनामा विश्वास गर्नु तिमीहरूले यी कुरा कहिल्यै नबिर्सिनु। मेरा मायालु नानीहरू मैले बाँडेका अनुभूतिहरू तिमीलाई कथा लाग्न सक्छ तर तिमीले जान्नु पर्छ । कथाहरू कसै न कसैका वास्तविकता नै हुन्छन्। बस मलाई यति आशा तिमीहरूबाट तिमीहरू यो देशको सुन्दर वसन्त बन्ने छौ। इन्द्रेणीको रङ्ग बनेर र यो उजाड देशको क्यान भासमा आफ्नो हातले सुनौलो भविष्य कोर्नेछौ।बस मलाई यही भविष्यको रङ्गलाई कल्पना गरेर आत्म विभोर हुन मन लाग्छ । भनिन्छ, जीवन अनुभवकाे शास्त्र हाे । यहि अनुभवहरू बटुल्दै सुन्दर संसारकाे कल्पना गर्दै मुलुक निर्माणकाे निम्ति तिम्रा कलिला मनहरू सधैं लाग्रे छन । ती कलिला मनहरू कुमालेकाे माटाे जस्तै हाँडी बनाउने काम देश निर्माणमा हुन सकाेस । यहि शुभकामना र सन्देश छ ।